I-extrapolation kunye nokudibanisa kokubili zisetyenziselwa ukuqikelela ubuncwane bokungqinelana kwintlobo esekelwe kwezinye izinto. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zokudibanisa kunye nezindlela zokuphucula i-extrapolation zendlela esekelwe kuyo yonke into ebonakalayo kwidatha . Ezi ndlela zombini zinamagama afana kakhulu. Siza kuhlola ukuhluka phakathi kwabo.
Ukuchazela umahluko phakathi kokugqitywa kwepolisi kunye nokudibanisa, kufuneka sijonge i-prefixes "eyongezelelweyo" kunye "phakathi". Isiqalo "esongezelelweyo" sithetha "ngaphandle" okanye "ngaphezu koko." Isiqalo "phakathi" sithetha "phakathi" okanye "phakathi." Ukukwazi nje ezi ntsi ngiselo (ezivela kwimvelaphi yazo kwisiLatini ) kuyindlela ende yokuhlukanisa phakathi kwezi ndlela ezimbini.
Kuzo zombini iindlela, sithatha izinto ezimbalwa. Siye sachonga iinguqu ezizimeleyo kunye nezimilo ezixhomekeke kuyo. Ngokusebenzisa isampuli okanye ukuqokelela idatha, sinemibuzo emibini yezinto eziguqukayo. Sicinga ukuba senze umzekelo kwi data yethu. Oku kungaba ngumgca wesithuba esincinane sokulungelelanisa, okanye mhlawumbi ungaluhlobo oluthile lomlenze olinganisa idatha yethu. Kukho nawuphi na, sinomsebenzi ochaphazela ukuhluka okuzimeleyo kwiintlobo ezixhomekeke kuzo.
Injongo akuyona nje imodeli ngenxa yaso, ngokuqhelekileyo sifuna ukusebenzisa umzekelo wethu wokubikezela. Ingakumbi ngokukhethekileyo, unikezelo oluzimeleyo, luya kuthini na ixabiso eliqikelelweyo lenkqubela exhomekeke kuyo? Ixabiso esiyifakayo kwi-variable yethu ezizimeleyo liya kugqiba ukuba sisebenzisana ne-extrapolation okanye i-interpolation.
Singawusebenzisa umsebenzi wethu ukuqikelela ixabiso lentengo exhomekeke kuyo kwi-variable variable ephakathi kwedatha yethu.
Kule meko, senza intetho.
Cinga ukuba idatha kunye no- x phakathi kwe-0 no-10 isetyenziselwa ukuvelisa umgca wokuguqula y = 2 x + 5. Singawusebenzisa lo mgca wokulungelelanisa ukulinganisela ixabiso l elihambelana ne x = 6. Mane nje ufake ixabiso lexabiso kwi- equation sibona ukuba y = 2 (6) + 5 = 17. Ngenxa yokuba ixabiso lethu le- x liphakathi kobubanzi bexabiso elisetyenziselwa ukwenza umgca wendlela efanelekileyo, lo ngumzekelo wokubhaliweyo.
Singawusebenzisa umsebenzi wethu ukuqikelela ixabiso lentengo exhomekeke kuyo ezichaziweyo ezizimeleyo ezingaphandle kwedatha yeenkcukacha zethu. Kule meko, senza umgaqo-nkqubo.
Masithi ukuba ngaphambi kokuba le datha kunye no- x phakathi kwe-0 no-10 isetyenziselwa ukuvelisa umgca we-regression y = 2 x + 5. Singawusebenzisa lo mgca ofanelekileyo ukulinganisa ixabiso y ehambelana no x = 20. Mane ufake loo xabiso equation kwaye sibona ukuba y = 2 (20) + 5 = 45. Ngenxa yokuba ixabiso lethu elingu-x alikho phakathi kobubanzi bezinto ezisetyenziselwa ukwenza umgca wokulungelelanisa, lo ngumzekelo wokugqithiswa komsebenzi.
Kwiindlela ezimbini, ukuchaneka kukhethwa. Oku kungenxa yokuba sinamathuba amaninzi okufumana uqikelelo oluchanekileyo. Xa sisebenzisa i-extrapolation, senza ukucinga ukuba indlela yethu yokujonga iqhubela phambili kwiimpawu zecandelo x ngaphandle kwesiqhelo esasilisebenzisa ukwenza umzekelo wethu. Oku kungenjalo, kwaye ke kufuneka silumke kakhulu xa sisebenzisa amacandelo okuphucula.
Qonda izihloko eziphambili ze-'Ado enkulu malunga nento '
Iimpawu eziqhelekileyo ezingaqhelekanga ezivela kwiTheyibhile yamaDatha angamaRandi
I-Jiahu - Ubungqina be-Chinese Neolithic Ubungqina beRic, i-Flutes, nokuBhala
India Indawo Igama Lenguqu
Iipodcasts ezigqwesileyo zabaFundi beMithetho
Ukuguqulwa kweMerika: Ukuvinjelwa kwe Fort Stanwix
Isingeniso kwi-Agricola ngeTacitus
Izizathu ezi-10 eziphezulu zokuba nguMfundisi
Inkcazo yoBungqina boBuchule kunye nemizekelo yezizathu zokubangela ukuba zibuhlungu ubuncinci
Igalelo legazi kunye nomsebenzi
Indlela Yokuthabatha Abalingani beJamani Kwikhompyutheni Yakho